Liraglutide: ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား2နှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုကုသရန်အတွက်ဆေးဝါး
1 ။ Liraglutide
2 ။ Liraglutide ဖွဲ့စည်းပုံ
3 ။ Liraglutide အရိပ်အယောင်
4 ။ လုပ်ဆောင်ချက်၏ Liraglutide ယန္တရား
5 ။ Liraglutide ၏သောက်သုံးသောနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးညွှန်ကြားချက်
6 ။ Liraglutide ၏အကျိုးကျေးဇူးများကဘာလဲ။
7 ။ Liraglutide ကိုအသုံးပြုသည့်အခါအောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ / သတိပေးချက်များကိုဂရုပြုသင့်သည်
8 ။ Liraglutide interaction က
9 ။ လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ
10 ။ ကောက်ချက်
Liraglutide (204656-20-2) ကွဲပြားခြားနားသောကုထုံးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်သောကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်အောက်မှာရောင်းချဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့စျေးကွက်တွင် Liraglutide ၏အသုံးအများဆုံးတံဆိပ်များမှာ Victoza နှင့် Saxenda ဖြစ်သည်။ Liraglutide အသုံးပြုမှုသည်သင်ဝယ်ယူသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Victoza သည်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစာအာဟာရများသောအားဖြင့်အရွယ်ရောက်သူများတွင်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်အရွယ်ကလေးများတွင်ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား ၂ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဗစ်တိုဇာသည်နှလုံးရောဂါနှင့်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါရှိသည့်လူကြီးများတွင်လေဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်နှလုံးရောဂါကဲ့သို့သောနှလုံးပြproblemsနာများ၏အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရာတွင်အရေးပါကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
သို့သော်ငြားလည်း, Saxendaအခြား Liraglutide တံဆိပ်လည်းဖြစ်သည့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခြေအနေအမျိုးမျိုးခံစားနေရသောအခါကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်သင့်တော်သောအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Liraglutide အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားဖြစ်သော်လည်း Saxenda ကို 1 အမျိုးအစားသို့မဟုတ်ဆီးချိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးအတွက်ကုသရန်အသုံးမပြုပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အစာစားချင်စိတ်ကိုလျော့ကျစေသောသို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့နည်းစေသည့်ဆေးများလည်းမဟုတ်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်လည်းအကြံပြုနိုင်သည် Liraglutide အသုံးပြုသည် ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာမပါဝင်သောအခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်။ သို့သော်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များအတွက်သင်၏ဆရာဝန်ဆီမှမှန်ကန်သော Liraglutide ဆေးကိုအမြဲတမ်းရယူသင့်သည်။
Liraglutide ကိုအွန်လိုင်းစတိုးအမျိုးမျိုးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဆိုင်များတွင်ရောင်းချနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏အရင်းအမြစ်ကိုအမြဲတမ်းသတိထားသင့်သည်။ သင်၏ဆေးကိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအတွေ့အကြုံရှိသောရောင်းသူတစ် ဦး ထံမှရရှိရန်သေချာစွာသင့်လျော်သောသုတေသနပြုပါ။ သင်သောက်သုံးသည့်ဆေးဝါးအရည်အသွေးသည်သောက်သုံးသောသံသရာအဆုံး၌သင်တွေ့ကြုံရမည့်ရလဒ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ Liraglutide ကုန်ကျစရိတ်သည်အရင်းအမြစ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ကွဲပြားသော်လည်းသင်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရရှိရန်သေချာစေနိုင်သည်။ အရင်းအမြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာလျှင်သင်၏ဆေးဝါးများနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
2. Liraglutide ဖွဲ့စည်းပုံ
ဓာတုဗေဒအရ Liraglutide ဖွဲ့စည်းပုံ antigyperglycemic လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအရေပြားအောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်နေသည့်ကြာရှည်စွာလုပ်ဆောင်သော fatty acylated glucagon ကဲ့သို့သော peptide ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကြာရှည်စွာကုသမှုသည်ဖက်တီးအက်စစ်နှင့်အယ်လ်ဗျူမင်နှင့်အလွယ်တကူတွဲဖက်နိုင်သော GLP-1 နှင့် palmitic acid တွဲဖက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အယ်လ်ဗျူမင်အနှောင်အဖွဲ့သည် Liraglutide ကိုသင်၏ဆေးညွှန်းကိုသောက်ပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းသည် GLP-1 အားတဖြည်းဖြည်းဖြေးဖြေးချင်းထွက်လာစေသည်။ ဒါကသင်လိုချင်သောရလဒ်များကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရရှိစေပါသည်။
3. Liraglutide အရိပ်အယောင်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆေးဝါးကုသမှုအမျိုးမျိုးကိုကုသရန် Victoza နှင့် Saxenda တို့ကို FDA ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Victoza သည်နှလုံးပြproblemsနာများနှင့်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါအတွက်ကုသမှုကိုခံယူခဲ့သည်။ အော့အန်ခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်းနှင့် ၀ မ်းလျှောခြင်းကဲ့သို့သောအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်လည်းလူသိများသည်။ Saxenda သည်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကိုကုသရာတွင် FDA ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုသင်လျှော့ချလိုပါက Liraglutide ကိုသောက်သုံးသင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ်လိုပါက Liraglutide အဝလွန်ခြင်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်သည်။ အဝလွန် Liraglutide အသုံးပြုသူများကိုသူတို့၏အလေးချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီသည် Liraglutide အမှုန့်ဖြင့်ကုသနိုင်သည့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်ကြုံတွေ့ရလျှင်ပင်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲဆေးကိုမသောက်ပါနှင့်။ သို့သော်၊ ဤဆောင်းပါးတွင်မပါ ၀ င်သောအခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုကုသရာတွင်သင့်အားကူညီရန်သင့်ဆရာဝန်ကဤဆေးကိုညွှန်းနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။
4. လုပ်ဆောင်ချက်၏ Liraglutide ယန္တရား
များသောအားဖြင့် Liraglutide သည်သင်သောက်သုံးလိုသည့်ပမာဏပေါ် မူတည်၍ အလုပ်လုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Liraglutide သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေခြင်းအတွက် Liraglutide ဆေးသောက်သောလူများ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားသည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါကိုကုသရန်အသုံးပြုသူများနှင့်ကွဲပြားသည်။ Liraglutide အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုသည် Victoza နှင့် Saxenda သူတို့သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်စနစ်သို့ရောက်သောအခါကွဲပြားခြားနားစွာလုပ်ဆောင်ပါ။
ဥပမာ၊ Liraglutide အဝလွန်ခြင်း (Saxenda) သည်သင်၏ငတ်မွတ်မှုကိုထိန်းညှိပေးသည့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအစာစားချင်စိတ် (glucagon ကဲ့သို့သော peptide သို့မဟုတ် GLP-1) ထုတ်လုပ်မှုကိုနှိမ်နှင်းခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ GLP-1 ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းသွားသည်နှင့်အမျှသင်၏အစာစားချင်စိတ်သည်လျော့ကျသွားကာနောက်ဆုံးတွင်ကယ်လိုရီနည်းပါးလာသည်။ ရေရှည်တွင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျော့သွားလိမ့်မည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာမှုအတွက်ကယ်လိုရီတွင်တာဝန်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ကသူတို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လျှင်၊ ပေါင်များများချရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ဗစ်တိုဇာသည်မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူကတိထားသည့်ရလာဒ်များကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်နည်းအမျိုးမျိုး သုံး၍ အလုပ်လုပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာ Victoza သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသကြားဓာတ်ပမာဏကိုထိန်းညှိပေးသောသင်၏အစာအိမ်မှထွက်သောအစာကိုနှေးကွေးစေခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ထိုဆေးသည်သင့်အသည်းကိုသကြားများများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုလည်းတားဆီးပေးသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Victoza တွင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော Liraglutide သည်သင်၏သရက်ရွက်ကိုသွေးသကြားဓာတ်မြင့်မားသောအခါအင်ဆူလင်ဓာတ်ပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဒီဆေးဟာ beta ဆဲလ်တွေရဲ့ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်ဒီလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုမြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်စနစ်အတွင်းရှိသကြားဓာတ်ပမာဏကိုပျက်စေသောအင်ဆူလင်ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအင်ဆူလင်ထုတ်လုပ်မှုကိုနှိုးဆွပေးသောဗိုတိုဇာသည်အဓိကကုသရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည် အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါ ဝမ်းရောဂါ။
5. Liraglutide ၏သောက်သုံးသောနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးညွှန်ကြားချက်
Liraglutide အသုံးပြုသည် ကုသနေသည့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆေးကုသမှုခံယူနေသည့်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ဆေးကိုသောက်ရန်ဆေးဆရာဝန်ကသတ်မှတ်သင့်သည်။ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များသည်ဤဆေးကိုသောက်ရန်အကြံမပြုထားပါ။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကလည်းမတူကြဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းဆေးမသောက်ခင်ဆေးစစ်ဖို့အမြဲအကြံပြုလိုတယ်။ Liraglutide သည်ထုတ်လုပ်သူမှအကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်များပါသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံသင့်အတွက်အသုံးမဝင်နိုင်ပါ။ သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုစစ်ဆေးပြီးသည့်အခါသင့်ဆရာဝန်သည်သင့်အတွက် Liraglutide မှန်မှန်သောက်ရန်သတ်မှတ်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောလူသည်ဆရာဝန်ဖြစ်သည်။
Liraglutide သည်သင်၏လက်မောင်း၊ ဝမ်းဗိုက်သို့မဟုတ်ပေါင်တို့တွင်ထိုးသင့်သောထိုးဆေးဖြစ်သည်။ သင်၏ Liraglutide ဆေးကိုသောက်ရန်အတွက်အတိအကျသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်မရှိပါ။ သို့သော်သင်ကအစာနှင့်မစားပဲသောက်နိုင်သည်။ Liraglutide ဆေးထိုးသည့်နေရာများအားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသို့မဟုတ်ဒေသအတွင်းသင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောနာကျင်မှုများကိုလျှော့ချရန်သင်အမြဲတမ်းလှည့်နိုင်သည်။ ဆေးသောက်ချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားသောဆေးညွှန်းကိုမပြုပြင်ဘဲနှစ်သိမ့်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တိုင်းစစ်ဆေးရန်အမြဲအကြံပြုလိုတယ် Liraglutide ဆေးထိုး အမြင်အာရုံ; သင်ဆေးရည်ကိုဖြေရှင်းချက်သည်အရောင်တောက်။ ကြည်လင်ပြီးမြင်နိုင်သောအမှုန်များမရှိသည့်အခါတွင်သာသောက်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ဖြေရှင်းချက်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရောင်များဖြစ်ပေါ်လာပါကသင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုဘဲမယူပါနှင့်။
Liraglutide အမှုန့်သောက်သုံးခြင်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏သည်းခံနိုင်မှု၊ အသက်နှင့်ကုသမှုခံနေရသည့်အခြေအနေအပေါ်မူတည်သည်။
ကနဦး Liraglutide အမှုန့် (204656-20-2) ထိုး အရွယ်ရောက်သူများအတွက်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သောက်သင့်သော 0.6mg ဖြစ်သည်။ တစ်ပါတ်အကြာတွင်တစ်နေ့တစ်ကြိမ် 1.2mg ဆေးကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါကသင်၏ဆရာ ၀ န်သည်တစ်နေ့လျှင် 1.8mg အထိထပ်မံတိုးနိုင်သည်။ Liraglutide ပြုပြင်သည့်ဆေးသည်တစ်နေ့လျှင် 1.2 နှင့် 1.8 မီလီဂရမ်အကြားဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်အများဆုံးပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် 1.8mg ဖြစ်သည်။
တစ်နေ့လျှင် ၀.၆ မီလီဂရမ်ကန ဦး ဆေးထိုးခြင်းသည်ကုထုံးစတင်ခြင်းမှရရှိသောအစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီး glycemic control အတွက်လုံလောက်မှုမရှိပါ။ သို့သော် Liraglutide သည်အင်ဆူလင်အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲအမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုရောဂါသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါ ketoacidosis ရှိသည့်လူနာများကိုမသောက်သင့်ပါ။ သင်ဤကုထုံးကိုစတင်သောအခါ, hypoglycemia အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အင်ဆူလင် secretagogue လျှော့ချစဉ်းစားပါ။
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြproblemsနာများရှိသောလူကြီးများအတွက်ကန ဦး Liraglutide သောက်သုံးမှုသည်တစ်နေ့လျှင် 0.6mg ဖြစ်ပြီးပထမအပတ်အတွက်သောက်သင့်သည်။ နောက်အပတ်တွင်တစ်နေ့လျှင် 1.2mg ပမာဏကိုတိုးမြှင့်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် glycemic ထိန်းချုပ်မှုကိုမအောင်မြင်ပါကသင့်ဆရာဝန်ကတစ်နေ့လျှင် 1.8mg ဆေးကိုထပ်တိုးသင့်သည်။ သို့သော်အချိန်အားဖြင့် Liraglutide အမှုန့် ထိုးအများဆုံးတိုးမြှင့်ထားသည်, သင်လိုချင်သောရလဒ်များကိုရရှိကြလိမ့်မည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသောက်သုံးသောပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် 1.2mg နှင့် 1.8mg များအကြားဖြစ်သင့်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအများဆုံးပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် 1.8mg ဖြစ်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသို့မဟုတ်အဝလွန်ခြင်းအတွက် Liraglutide အရွယ်ရောက်ပြီးသူထိုးသည်
အဆိုပါ ကိုယ်အလေးချိန် liraglutide အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းရောဂါလက္ခဏာတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်သောက်သုံးမှုတိုးလာတာကိုလိုက်နာသင့်တယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုရရှိရန်အတွက်သောက်သုံးချိန်ညှိခြင်းကိုနောက်ထပ်တစ်ပတ်နောက်ကျနိုင်သည်။ သို့သော်ဤဖြစ်စဉ်တွင်သင်၏ဆရာဝန်ကသင့်ကိုလမ်းညွှန်သင့်သည်။ ဤနေရာတွင်ကန ဦး ဆေးညွှန်းသည် ၀.၆ ဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ်အရေပြားအောက်ဆုံး၌သောက်သင့်သည်။ ဒုတိယအပတ်တွင်တစ်နေ့လျှင် ၁.၂ မီလီဂရမ်အထိဆေးထိုးနိုင်သည်။ တတိယအပတ်တွင်တစ်နေ့လျှင် ၁.၈ မှထပ်တိုးသောက်သုံးနိုင်သည်။ စတုတ္ထအပတ်တွင်ဆေးသောက်ရန် ၂.၄ မီလီဂရမ်နှင့်ပဉ္စမရက်သတ္တပတ်တစ်နေ့လျှင် ၃ မီလီဂရမ်အထိသောက်သင့်သည်။ သို့သော်သင့်ဆရာဝန်ကသင့်အားမည်သည့်အချိန်တွင်မည်သို့သောက်ရမည်ကိုသင်လမ်းညွှန်လိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆေးထိုးသည်တစ်နေ့လျှင် ၃ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမခံနိုင်ပါကဆရာဝန်ကသင့်အားသောက်သုံးသောဆေးကိုမသောက်ရန်အကြံပေးနိုင်သည်။ ဤဆေးကိုသုံးပြီးနာတာရှည်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းညှိနိုင်ခြင်းသည်မြင့်မားသောဆေးပမာဏဖြင့်သာရရှိသည်။ အဝလွန်ခြင်းတွင် Saxenda Liraglutide အမှတ်တံဆိပ်သည်ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းရန်အရေးကြီးကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီး၊ ဆေးသည်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါအတွက်ကုသရန်မသုံးပါ။ သို့သော် Victoza အမျိုးအစား3ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၏ကုသမှုများအတွက်လူသိများသည်။
Liraglutide ထိုးဆေးကိုအနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများသာသောက်သင့်သည်။ သူတို့ကဒီ peptide နဲ့ကုသနိုင်သည့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုပြသရင်တောင်ဒီထက်နည်းတဲ့မည်သည့်ကလေးမဆိုဒီဆေးကိုမသောက်သင့်ဘူး။ ကလေးအထူးကု liraglutide သောက်သုံးမှုသည်ကုသမှုခံယူသည့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောဆေးများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား2များအတွက်ကလေးသောက်သုံးသော
အကြံပြုထားသောကန ဦး Liraglutide ဆေးပမာဏသည် ၀.၆ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီးတစ်ရက်လျှင်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်သောက်သင့်သည်။ ထို့နောက်ဆေးကိုတစ်နေ့လျှင် ၁.၂ မီလီဂရမ်အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ဂလူးကို့စ်ထိန်းချုပ်မှုမရရှိပါကနောက်အပတ်တွင်ဆေးသည် ၁.၈ ဂရမ်အထိထပ်မံတိုးနိုင်သည်။ ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား ၂ အတွက်အများဆုံးကလေးဆေးထိုးနှုန်းမှာတစ်နေ့လျှင် ၁.၈ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် ၀.၆ မီလီဂရမ်မှ ၁.၈ မီလီဂရမ်အထိဖြစ်သည်။
liraglutide ကိုလည်းကျောက်ကပ်နှင့်အသည်းပြproblemsနာများကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကုသရာတွင်ကလေးများအားလည်းညွှန်ကြားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီအခြေအနေနှစ်ခုကိုကုသတဲ့အခါ Liglutide ကိုသေသေချာချာဂရုစိုက်သင့်ပြီးအလွန်အကျွံသောက်သုံးသည့်အခါပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ အသည်းသို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပြissuesနာများအတွက် liraglutide peptide ကိုသောက်သောအခါဆေးချိန်ညှိရန်မလိုအပ်ပါ။ liraglutide သောက်သုံးသောအခါ hypoglycemia ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အင်ဆူလင်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချပါ။
ငါ overdose လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း
မည်သည့်ဆေးဝါးကိုမဆိုအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းသည်မကောင်းသောအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ ကိုယ်အလေးချိန်အတွက် Liraglutide ထိုး သို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုကုသခြင်း။ သင့်ဆရာဝန်ပေးသောသောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်များကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။ အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည်သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြcomplနာများဖြစ်စေနိုင်သည်အထိပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည်မတော်တဆမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ်တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အသုံးများသောဆေးအလွန်အကျွံသောက်သုံးသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်ပြင်းထန်သောပျို့ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သင်အကြံပြုထားသည့်ဆေးထက်ပိုသောက်သုံးမိသည်ကိုသတိပြုမိပါကအမြန်ဆုံးဆေးကုသမှုခံယူပါ။ သင်၏အကူအညီအတွက်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။
6. Liraglutide ၏အကျိုးကျေးဇူးများကဘာလဲ။
နှစ်များတစ်လျှောက် Liraglutide သည်အထူးသဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလောကတွင်အကျိုးကျေးဇူးများစွာပေးအပ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျအများဆုံးသာတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ် liraglutide အကျိုးခံစားခွင့်, သင့်ဆရာ ၀ န်မှအကြံပြုသည့်အတိုင်းသောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်များနှင့်သင့်လျော်သောအစားအစာသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုသင်လိုက်နာပါက။ ဤနေရာတွင်အကျော်ကြားဆုံး Liraglutide အကျိုးခံစားခွင့်အချို့ရှိပါသည်။
Liraglutide အမှတ်တံဆိပ် Victoza သည်ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား ၂ ကိုကုသရန် FDA မှအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ ဤဆေးသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသကြားဓာတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသကြားဓာတ်များများမြင့်မားပါက liraglutide သည်သင်၏သရက်ရွက်ကိုအားဖြည့်အင်ဆူလင်အင်ဇိုင်းပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်သွေးအားဖြင့်ဂလူးကို့စ်ကိုလျော့ချပေးသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် FID ကခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အစာစားချင်စိတ်နှင့်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုထိရောက်စွာသက်သေပြပြီးသည့်နောက်အဝလွန်ခြင်းကိုကုသရန် Liraglutide ကို FDA ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် liraglutide ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းကိုအမျိုးသားများထက်အမျိုးသားများထက်သိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည်အမျိုးသားများသည်ဤမူးယစ်ဆေးမှအကျိုးမခံစားရဟုမဆိုလိုပါ။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွေ့အကြုံပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်သင့်တော်သောအစားအသောက်များနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုလည်းသောက်သုံးသင့်သည်။
Liraglutide သည်သင်၏နှလုံးကြွက်သားများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအရ liraglutide ကိုသောက်ခြင်းသည်2ဆီးချိုရောဂါနှင့်အဝလွန်ခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသောနှလုံးရောဂါများကိုတိုးတက်စေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သင်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းညှိပေးသည့်ဆေးသည်သင့်သွေးကြောကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည်။
၎င်းဆေးသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းသည် anti-oxidant နှင့် inflammatory anti-supplement တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုတစ်ခုအရ liraglutide သည်အရက်စွဲသူများအားကူညီနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော် liraglutide အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည်သင့်အားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြcomplနာများနှင့်ထိတွေ့နိုင်ပြီးမျှော်လင့်ထားသည့်အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
7. Liraglutide ကိုအသုံးပြုသည့်အခါအောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ / သတိပေးချက်များကိုဂရုပြုသင့်သည်
အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံသောက်သုံးသည့်အခါဆေးဝါးတိုင်းနီးပါးသည်သင့်အားပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်က liraglutide ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းမှုကိုတုံ့ပြန်ပုံ၏ရလဒ်အနေဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့ liraglutide သတိပေးချက်များ ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ပျက်နေပြီးအချိန်နှင့်အမျှပျောက်ကွယ်သွားသော်လည်း၊ အောက်ပါသက်ရောက်မှုများသည်အချိန်နှင့်အမျှပျောက်ကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့အလွန်ပြင်းထန်လွန်းခြင်းရှိပါကဆေးကုသမှုခံယူပါ။
အလွန်ပြင်းထန်သော liraglutide သတိပေးချက်များရှိပါသည်၊ ၎င်းတို့ကိုသင်စတင်စမ်းသပ်ကြည့်ပါကချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်သည်။
လည်ချောင်း၊ လျှာ၊ မျက်နှာ၊ မျက်စိသို့မဟုတ်ပါးစပ်ရောင်ရမ်းခြင်း။
ဤအလေးနက်သည် Liraglutide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ, ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအကူအညီကိုသင်ရှာဖွေနေစဉ်သောက်သုံးသောဆေးများကိုချက်ချင်းဖြတ်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။
8. Liraglutide interaction က
မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကသင်၏ဆေးဝါးမည်သို့အလုပ်လုပ်မည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Liraglutide ဆေးကိုသင်မသောက်မီ၊ သင်ဆေးသောက်နေသည့်အခြားမည်သည့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုမဆိုဆရာ ၀ န်အားအသိပေးရန်လိုအပ်သည်။ အချို့သောဆေးဝါးများသည်အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်သင်သောက်သုံးနိုင်သည့်အခြားမည်သည့်ဆေးဝါးကိုမဆိုသင်၏ဆရာဝန်သိရှိထားရန်ကောင်းသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိရန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုဘဲစတင်ခြင်း၊ သောက်ခြင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆေးဝါးကိုမျှမသောက်ပါနှင့်။
Liraglutide ပါ ၀ င်သည့်အခြားမည်သည့်ဆေးကိုမဆိုမသောက်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းနှင့်သင့်အားပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ သင့်ဆရာဝန်ကသင့်အားအခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည် Liraglutide interaction က ရလဒ်မြှင့်တင်ရန်။ အခြားအရာများအနက် acetohexamide, albuterol, cinoxacin နှင့် danazol ကဲ့သို့သော Liraglutide ဆေးနှင့်အတူသင်သောက်သုံးနိုင်သောဆေးများစွာရှိသည်။
အဆိုအရ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း liraglutide ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများတွင်သုံးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေစဉ်နှင့်ပြီးနောက်တွင်ခံစားရသောရလဒ်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျေနပ်အားရကြသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအရ၎င်းဆေးသည်အဝလွန်ခြင်း၊ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်မတူညီသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများမှရရှိသည့်နှလုံးရောဂါများကိုကာကွယ်ခြင်းစသည့်အမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုကုသရာတွင်မည်သို့အသုံးဝင်သည်ကိုပြသသည်။ Liraglutide အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကအနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်အရွယ်ရှိကလေးများတွင်ဆီးချိုအမျိုးအစား ၂ ကိုကုသရာတွင်အစွမ်းထက်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
သို့သော်အချို့သုံးစွဲသူများသည်ဤဆေးနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံမကောင်းခဲ့ကြသော်လည်း၎င်းကို Liraglutide အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်သည်းခံနိုင်မှုတို့ကြောင့်ဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သောသတင်းမှာသင်၏ဆရာဝန်နှင့်အချိန်မီဆက်သွယ်ပါက liraglutide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်နိုင်သည်။ ဤဆေးကိုသောက်နေစဉ်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုမခံစားရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏ဆေးညွှန်းကိုမစတင်မှီနှင့်သင့်အားမှန်ကန်သောသောက်သုံးသောဆေးကိုသတ်မှတ်ရန်ခွင့်မပြုမီဆေးစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရန်နှင့်သင်သောက်သုံးနိုင်သည့်အခြားမည်သည့်ဆေးဝါးအကြောင်းမဆိုသင့်ဆရာဝန်အားအသိပေးရန်လည်းအကြံပြုလိုပါသည်။
ဤဆေးသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလောကတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးအဝလွန်ခြင်း၊2အမျိုးအစားဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးပြproblemsနာများကိုအခြားသူများအကြားကုသမှုတို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Liraglutide အမှုန့် (204656-20-2) ရောင်းချရန်အတွက်အွန်လိုင်းစတိုးအမျိုးမျိုးတွင်ရနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကို Saxenda နှင့် Victoza ကဲ့သို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးတွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။ သို့သော်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုစီသည်သင်၏မှာကြားမှုမပြုလုပ်မီမည်သည့်အတွက်အသုံးပြုသည်ကိုသင်သေချာစွာနားလည်ထားပါ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း liraglutide အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုစီကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်အသုံးပြုသည်။ Victoza အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါကုသမှုနှင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်မြင့်မားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနှလုံးရောဂါများကိုအသုံးပြုစဉ် Saxenda သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုကုသရန်အတွက်ထောက်ခံသည်။ သို့သော် Liraglutide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမခံစားရရန်သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
သင်၏အကြောင်းကိုတိကျမှန်ကန်သောသုတေသနပြုရန်အကြံပြုလိုသည် ဝယ် liraglutide သင့်ရဲ့ဝယ်ယူမှုမချခင်အရင်းအမြစ်။ ဒီနေ့စျေးကွက်ထဲမှာ peptide ရောင်းသူများစွာရှိနေပြီးအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဆေးကိုဘယ်မှာရနိုင်မလဲဆိုတာသိဖို့ခက်ခဲစေပြီးသင့်ကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ ထုတ်ကုန်များနှင့်ရောင်းချသူမည်သို့လည်ပတ်သည်ကိုခြုံငုံ။ ရရန်ရောင်းချသူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ liraglutide သုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ပါ။ Liraglutide ၀ ယ်ယူသည့်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးနှင့်နာမည်အကြီးဆုံးသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အရည်အသွေးရှိသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များနှင့်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောဝန်ဆောင်မှုများကိုသင့်အားအာမခံပေးလိမ့်မည်။ Liraglutide ကုန်ကျစရိတ်သည်ရောင်းချသူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားသည်။
Liraglutide ကိုတရားဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်တာကြောင့်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေအတွက်သောက်ရမယ့်အချိန်မှာမင်းရဲ့ဆေးကိုသောက်သုံးခြင်းသံသရာတစ်ခုလုံးမှာပါ ၀ င်ပါ။
Kaakeh, Y. , Kanjee, အက်စ်, Boon, K. , & Sutton, ဂျေ (2012) ။ Liraglutide fi စူးရှသောကျောက်ကပ်ထိခိုက်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒ - လူ့ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဆေးဝါးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 32(1), e7-e11 ။
Marso, SP, Daniels, GH, Brown-Frandsen, K. , Kristensen, P. , Mann, JF, Nauck, MA … & Steinberg, WM (2016) ။ အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါအတွက် Liraglutide နှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရလဒ်များ။ ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်, 375(4), 311-322 ။
Lind, အမ်, Hirsch က, IB, Tuomilehto, ဂျေ, Dahlqvist, အက်စ်, Ahrén, ခ, Torffvit, O. , ... & Sjöberg, အက်စ် (2015) ။ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါကိုနေ့စဉ်အင်ဆူလင်ထိုးဆေးအမျိုးမျိုးဖြင့်ကုသသောလူများတွင် Liraglutide: ကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှု (MDI Liraglutide trial) ။ Bmj, 351, h5364 ။
ဒေးဗီးစ်, MJ, Bergenstal, R. , Bode, ခ, Kushner, RF, Lewin, အေ, Skjøth, TV, ... & DeFronzo, RA (2015) ။ အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူလူနာအကြားကိုယ်အလေးချိန်များအတွက် liraglutide ၏ထိရောက်မှု: အစကေးဆီးချိုရောဂါလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုကျပန်း။ Jama, 314(7), 687-699 ။